Thursday October 29, 2020 - 04:13:19 in Wararka by Editor Caynaba News
Musharax Madaxweyne, Xasan Cali Khayre oo maalmahaan Istanbul u joogay dardar gelinta barnaamijkiisa ololaha doorashada
ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, ganacsatada iyo arday waxbarashada u jooga dalkaas.
Dhammaan dhinacyada kulanka la yeeshay Xasan Cali Khayre oo qiray in xiliigii uu Ra’iisul Wasaaraha ahaa uu shaqa badan u qabtay dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayaa ku taageeray dadaalka iyo ololaha uu ugu jiro qabashada xilka madaxweynaha dalka, waxayna u caddeeyeen inay garabkiisa taaganyihiin.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, ayaa Xasan Cali Khayre guddoonsiiyay shahaado Sharaf uu ku muteystay shaqadii iyo wax qabadkiisii ballaarnaa ee sedaxda sano iyo barka uu qaranka u shaqeynayay.
Xasan Cali Khayre ayaa ganacsatada, ardayda iyo jaaliyadda kale ee dalka Turkiga waxuu uga mahad celiyay taageerada iyo soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdiga la socda, waxuuna ku boorriyay inay dadaalka ugu badan ku bixiyaan samata bixinta qarannimada iyo dib-u-dhiska dalka.
Khayre oo bishii hore shaaciyay musharaxanimadiisa xilka madaxweynaha dalka, ayaa dalka dibaddiisa ka wada olole xooggan, si uu xafiiska uga bedelo madaxweynihii ay sedaxda sano soo wada shaqeynayeen hase yeeshee ay isku khilaafeen hannaanka iyo waqtiga doorashada dalka.